Vaovao - Ahoana no fiasan'ny fanamainana tanana?
Na miasa any amin'ny birao ianao, manao fanatanjahan-tena amin'ny toeram-pialam-boly na misakafo any amin'ny trano fisakafoanana, manasa tanana sy mampiasa fanamainana tanana dia zava-mitranga isan'andro.
Na dia mora aza ny tsy mijery ny fomba fiasan'ny fanamainana tanana, dia mety hahagaga anao ny zava-misy - ary azo antoka fa hampisaintsaina anao indroa izy ireo amin'ny fotoana ampiasanao azy.
Ny fanamainana tanana: ny fomba fiasany
Manomboka amin'ny fahatsapana izany
Tahaka ny teknolojia ampiasaina amin'ny varavarana mandeha ho azy, ny sensor-mihetsika dia ampahany lehibe amin'ny fomba fiasan'ny fanamainana tanana. Ary - na dia mandeha ho azy aza izy ireo dia mandeha amin'ny fomba maodely be ny sensor.
Mamoaka taratra tsy misy jiro infrared tsy hita maso, ny sensor eo amin'ny fanamainana tanana dia nipoitra rehefa nisy zavatra (amin'ity tranga ity, ny tananao) mihetsika mankamin'ny làlany, mamoaka ilay hazavana hiverina ao amin'ilay sensor.
Velona ny boribory fanamainana tanana
Rehefa mahatsikaritra ilay jiro miverina miverina ny sensor dia mandefa famantarana elektrika avy hatrany amin'ny alàlan'ny faribolana fanamainana tanana mankany amin'ny motera fanamainana tanana izy, milaza izany fa manomboka sy manovo herinaratra avy amin'ny famatsian-jiro.
Avy eo dia atolotra ny motera fanamainana tanana
Ny fomba fiasan'ny fanamainana tanana hanalana ny hamandoana be loatra dia miankina amin'ny maodelin'ny fanamainana ampiasainao, fa ny fanamainana rehetra dia misy zavatra roa iraisana: ny motera fanamainana tanana sy ny fan.
Ny maodely efa mahazatra sy be taona kokoa dia mampiasa ny motera fanamainana tanana hampandeha ny mpankafy, izay avy eo mitsoka rivotra amin'ny alàlan'ny fanamainana sy amin'ny alàlan'ny fantsom-baravarankely - manala ny rano amin'ny tanany io. Saingy, noho ny fanjifana herinaratra avo lenta, io teknolojia io dia lasa zavatra taloha.
Ahoana ny fiasan'ny fanamainana tanana ankehitriny? Eny, ny injeniera dia namorona karazana fanamainana vaovao toy ny modely sy ny hafainganam-pandeha haingam-pandeha izay manery ny rivotra amin'ny alàlan'ny noza tery tokoa, miantehitra amin'ny tsindry entin'ny rivotra hamoaka rano avy amin'ny hoditry ny hoditra.
Ireo maodely ireo dia mbola mampiasa motera fanamainana tanana sy mpankafy ihany, fa satria tsy mila angovo ilaina hanome hafanana, dia haingana kokoa ny fomba maoderina ary mahatonga ny fanamainana tanana tsy ho lafo intsony.
Ahoana no amelezan'ny solo-tanana ny bibikely
Mba hanaparitahana ny rivotra dia mila misintona rivotra avy amin'ny atmosfera manodidina ny mpanamory tanana aloha. Satria ny rivotra ao amin'ny trano fidiovana dia misy bakteria sy poti-potaka mikraoskaopy, ny olona sasany dia nanatsoaka hevitra momba ny fiarovana ny fanamainana tanana - fa ny tena marina dia tsara kokoa ny manimba mikraoba toy izay manaparitaka azy.
Amin'izao andro izao, mahazatra ny fanamainana tanana no amboarina miaraka amin'ny sivana rivotra mivaingana (HEPA) avo lenta ao anatiny. Kitatra marani-tsaina io dia ahafahan'ny mpanamory tanana mitsentsitra sy mamandrika ny 99% bakteria azo avy amin'ny rivotra sy loto hafa, midika izany fa madio foana ny rivotra mikoriana eny an-tanan'ny mpampiasa.
Fotoana fandefasana: Oktobra-15-2019